खेलकुद – ईमेची डटकम
काँकरभिट्टा । नाइट्चेस क्लवको आयोजना तथा मेची युमा चेस एकाडेमीको सहयोगमा मंगलवारबाट पिवी मेमोरियल केसिसि इन्टर ओपन चेस टुनामेन्ट २०२० सुरु भएको छ । काँकरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको सभाहलमा औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन् गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रीप्रसाद मैनालीले चेस खेलले व्याक्तिको बौद्धिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । नाईट्चेस एउटा सामाजिक संस्था रहेको र यसले […]
भारोत्तोलनकी सञ्जु चौधरीले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा स्वर्ण जित्नै इतिहास रचेकी छन् । तर भविश्यको चिन्ताले उनलाई यो सफलतामा पूर्ण खुुसी हुन दिएको छैन । खेलभन्दा जागिर गर भनेर घरबाट आउने दबाबबाट आजित उनी भन्छिन्, ‘बरु बिहान बेलुका खेल्थ्यौं । दिउँसो पार्टटाइम जागिर पाए आफ्नो पनि जीवन चल्थ्यो, घरपरिवार पनि खुसी हुन्थे ।’ ०००० […]
इमेची डटकम । २० मंसिर, काठमाडौं : १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत शुक्रबार गौरिका सिंहले अर्को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हात पारेकी छन् । यस अघि नै एक ऐतिहासीक स्वर्ण हात पारेकी गौरिकाले शुक्रवार पनि त्यो शिलसिला जारी राखेकी छन् । सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरीमा दुई सय मिटर ब्याक स्ट्रोकमा शुक्रबार गौरिकाले स्वर्ण जितेकी हुन्। […]
बिर्तामोड । संघर्षपुर्ण खेलमा जित निकाल्दै त्रिभुवन आर्मी क्लब जायोन स्पोर्टस क्लबद्धारा आयोजना भएको हाम्रो पुर्वाञ्चल गोल्डकपको प्रथम संस्करणको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । फाइनल प्रवेशका लागि आर्मीले टाइब्रेकरको सहारा लिनुपरेको थियो । जितसँगै आर्मीले कम्तिमा ६ लाख २५ हजार रुपैंयाँ पुरस्कार सुरक्षित गरेको छ । टाइब्रेकरमा आर्मीले आक्रामक एफसी सिक्किमलाई ४–३ गोल अन्तरले हरायो […]
काठमाडौं, २८ असोज । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टाेलीका कप्तान पारश खड्काले कप्तानी छाड्ने निर्णय गरेकाे घाेषणा गरेका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै खड्काले राष्ट्रिय टिमकाे कप्तानी छोडेको बताएका छन् । क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा भएकाेमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले नयाँ कमिटीलाई शुभकामना समेत दिएका छन् । नयाँ टिमलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका छन्, […]
बधाई ! कप्तान पारसको ऐतिहासिक शतकसँगै नेपाल विजयी
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले सिंगापुरविरुद्ध त्रिकोणात्मक सिरिजको दोस्रो खेलमा सानदार शतक प्रहार गरेसँगै नेपालले ९ विकेटको जित दर्ता गरेको छ । यो नेपालको लागि टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासमा पहिलो शतक पनि हो । पारसले ४९ बलमा शतक प्रहार गरेका हुन् । यसक्रममा उनले ६ चौका र १० छक्का प्रहार गरे । पारसले १५ […]
विश्वकप जित्ने भारतको सपना चकनाचुर ! ट्रोलको शिकार बन्न थाले कप्तान विराट कोहली
इमेची डेक्स । २५ असार, काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्ने भारतको सपना चकनाचुर भएको छ । लिग चरणमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको भारत न्युजिल्याण्डसंगको सेमिफाइनल खेलमा भने १८ रनले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिन पुग्यो । यो हारमा भारतका शीर्ष तहका ब्याट्सम्यानको घमण्ड र लापरवाही थियो । निकै फर्ममा रहेका रोहित शर्माले […]